Kitty For Me: July 2008
04 고맙다 (vocal Hyun Joong)
05 넌나의천국 (Inst.)
06 FIND (Inst.)
08 고맙다 (Accoustic Ver.)
SS501 - Find Music Video
မနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ ဟင်းချက်စားဖြစ်တယ်။ ဈေးဝယ်ထားပြီးသားလဲ ဖြစ်နေလို့။ ရုံးပိတ်ရက်ဆိုရင် ညဆို မနက် ၃ နာရီ ၄ နာရီအထိနေလေ့ရှိတော့ မနက် ၁၁ နာရီလောက်မှ အမြဲအိပ်ယာနိုးတယ်။ :P ။ မနေ့က ၀က်သားနဲ့ အာလူးဟင်း... ကြက်သားကို ကြက်သွန်နီဆီချက်၊သံပုရာသီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းနဲနဲနဲ့ အဖြူထည်လေးသုတ်..နောက်တော့ ခရမ်းချဉ်သီးငပိချက်လေးချက်တယ်။ ငရုတ်သီးများများလေးနဲ့။ ရှလွတ်။ စားပါဦး :D
Labels: Sar Par Oo
Super Junior H - 18 Jul 2008 KBS Music Bank Cooking King Performance
Download [MF] 92 MB
Sungmin and Donghae with their dogs
ခွေးလေးတွေရော...လူလေးတွေရော ချစ်စရာလေး။ :P ...
ခွေးလေးတွေ နာမည်က Ari, Bada, Mio...
ဒီနေ့အိမ်မှာ ၀က်စတူးလုပ်စားဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ရုံးတက်နေရတာနဲ့ ဘာမှ ချက်မစားဖြစ်တာကြာပြီ။ စနေတနင်္ဂနွေဆို နားချင်တာလဲပါတယ်။ ပျင်းတာလဲ ပါတယ်။ ဘာမှ မချက်ဖြစ်ဘူး။ ဈေးနဲ့လဲ နဲနဲဝေးတယ်။ BigC တို့ဘာတိ့မှာလဲ မ၀ယ်ချင်ပြန်ဘူး။ ဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လေ။ အခုတော့ ၀က်ခြေထောက်ကို BigC ကပဲ ၀ယ်လာတာပါ။ အဟီး :D ။ ဈေးကိုလဲ တကူးတက မသွားချင်တော့ဘူး။ ဘဲသွေးလဲ ၀ယ်လာတယ်။ အသီးအရွက်ကတော့ အနောက်လမ်းထဲမှာ အစုံရတယ်။ မနက်ကမှ နောက်ဘက်လမ်းကိုသွား.. မှို၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကန်စွန်းရွက် အဲဒါတွေသွားဝယ်လိုက်တယ်။ နေ့လယ်ထဲက စချက်ထားတာ။ ပေါင်းအိုးလဲမရှိတော့ မနူးမှာစိုးလို့။
၀က်ခြေထောက်ကို ပဲငံပြာရည်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်နဲ့နယ်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှာ ဆီပူပူထဲမှာ နဲနဲကြော်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ အဲဒီဆီတွေခပ်ထုတ်..ဒယ်အိုးကို ပြန်ဆေး (ဟီး အိုးက တစ်အိုးပဲရှိတယ်)။ ၀က်ခြေထောက်ကို နူးနေအောင် တစ်ရေပြီးတစ်ရေပြုတ်။ တော်တော်ကြီးနူးနေမှာ မှို၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်ဥပြုတ်ထားတာလေးထည့်ပြီး အုပ်ထားလိုက်တယ်။ ညနေ စားခါနီးမှာ ဆူနေအောင်ပြန်တည်ပြီး ကန်စွန်းရွက်ကို ထည့်လိုက်တယ်။ စားလို့ကောင်းတယ် (ကိုယ့်ဟာကိုချက်ပြီး ချီးကျူးနေတယ်)။
ဘာပဲပြောပြော စားပါဦး။ :D
Baby VOX Re.V Vol.2 - Baby VOX
01 I Believe [MF]
02 Sexy [MF]
03 Why [MF]
04 Crazy (You drive me Crazy) [MF]
05 허락 [MF]
06 거짓사랑 [MF]
07 나 어떡해 [MF]
08 Never say goo bye (China ver) [MF]
09 I Believe (MR) [MF]
10 Crazy (You drive me Crazy)(MR) [MF]
နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ ပထမဆုံးသီချင်း I Believe နဲ့ ဒုတိယသီချင်း Sexy သီချင်း..အဲဒီ ၂ ပုဒ်က ထိုင်းက Tata Young ရဲ့ သီချင်း ၂ ပုဒ်ဖြစ်နေတယ်။ ၂ ပုဒ်လုံးကလဲ Tata ရဲ့ နာမည်ကြီး အင်္ဂလိပ်လိုဆိုထားတဲ့ သီချင်း ၂ ပုဒ်။ ဘာလို့များ သူများသီချင်းကို ပြန်ဆိုတာလဲ မသိဘူး။ ကိုရီးယားတွေ သူများသီချင်းကော်ပီလုပ်ဆိုတာ တော်တော်နဲပါတယ်။ Never Say Goodbye ကို တရုတ်ဗာရှင်းပြန်ဆိုထားတယ်။ အားလုံး အသစ်တွေဆိုရင် ကောင်းမှာပဲ။ သူတို့ အဖွဲ့ကိုလဲ ကြိုက်လို့။
Posted by Me at 1:44 AM No comments:
Labels: Baby VOX Re.V Vol.2 - Baby VOX
01 천하무적 이효리 [MF]
02 Lesson [MF]
03 U-Go-Girl (with 낯선) [MF]
04 사진첩 [MF]
05 이발소 집 딸 [MF]
06 Don't Cry [MF]
07 괜찮아질까요? (with Bigtone) [MF]
08 Sexyboy (with Wheesung) [MF]
09 빨간자동차 (with Kim Gun Mo) [MF]
10 Hey Mr. Big [MF]
11 P.P.P (Punky Punky Party) (With 낯선) [MF]
12 My Life (외국곡) [MF]
13 Unusual (with Seo Jung Hwan) [MF]
ကိုရီးယားက မိန်းကလေး အဆိုတော်တွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးဆိုရင် Hyori လို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ သူတို့တွေကို စသိတဲ့အချိန်မှာ Finkl က မရှိတော့ဘူး။ Hyori က တစ်ယောက်ထဲ အခွေစထွက်လာတယ်။ 10 Minutes... စစခြင်းမှာ မကြိုက်ဘူး။ stage ပေါ်သူတက်လာခါနီးရင် Korean Britney Spears လို့ အမြဲကြေငြာတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ တဖြည်းဖြည်းကြိုက်လာတယ်။ 10 Minutes သီချင်းကလဲ နားထဲစွဲလာတယ်။ Hyori က လှလဲလှတယ်။ Sexy ဖြစ်အောင်လဲနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ပဲမများဘူး။ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
Labels: Lee Hyori, Lee Hyori Vol.3It's Hyorish
Shin Hye Sung - Purple Rain
Hye Sung ကလဲ အဆွေးသီချင်းတွေပဲ ဆိုနေတာပဲ။ သူတစ်ယောက်ထဲ အခွေတွေဆိုရင် အဆွေးသီချင်းတွေများတယ်။ အခုဒီ single မှာလဲ အဆွေးသီချင်းပဲ။ သီချင်းလေးကတော့ ကြိုက်ပါတယ် Hye Sung ဆိုထားတာကိုး.... :D
Labels: Purple Rain, Shin Hye Sung
Labels: Destiny of Love, download, Shinhwa
UCSM နေ့ညများအတွက် အမှတ်တရ......
Labels: Mary Hopkins Those Were The Days, My Friend
Super Junior H - 18 Jul 2008 KBS Music Bank Cookin...